Yedu 700ml 750ml girazi Bhodhoro ndiro hombe bhodhoro mugirazi yedu Bhodhoro muunganidzwa. Yakanakira kuchengeta mweya yakaita segin, vodka, whisky uye chero imwe mhando yechinwiwa chaunoda! Girazi remhando yepamusoro rinopa yako brand yakawedzera kukosha uye kunzwa kunodhura, zvichiita kuti ive sarudzo yakanaka yemabhodhoro edition shoma.
Yedu 700ml 750ml girazi Bhodhoro ndiro hombe bhodhoro mugirazi yedu Bhodhoro muunganidzwa. Yakanakira kuchengeta mweya yakaita segin, vodka, whisky uye chero imwe mhando yechinwiwa chaunoda! Girazi remhando yepamusoro rinopa yako brand yakawedzera kukosha uye kunzwa kunodhura, zvichiita kuti ive sarudzo yakanaka yemabhodhoro edition shoma. Ukobvu hwegadziko hunoita kuti bhodhoro rireme kupfuura bhodhoro rako regirazi, izvo zvinotoita kuti zviome kugogodza nekupwanya! Iyo ine mapendekete akafara anotungamira kusvika kune slim 19mm mutsipa, iyo inoenderana nesarudzo yekuvhara kwedu 19mm inosanganisira screw tops, cork stoppers uye yekudira caps. Iyo cork stopper inopa bhodhoro kunzwa kwerustic, nepo iyo yekudurura kapu yakanyatsokodzera kana iwe uchida inodzorwa kupihwa. Iri bhodhoro rakashongedzwa raizogadzira chipo chakanakisa kushamwari nemhuri - ingo batanidza makadhi ako echipo pamutsipa mutete. Kana iwe uri kushandisa bhodhoro iri kuita zvekutengesa zvekutengesa, pane yakawanda nzvimbo yekuti iwe uwedzere branding yako muchimiro chemavara nemanamira.
Opalescent girazi mabhodhoro: opalescent mabhodhoro egirazi anodhura zvakapetwa kaviri seakajairika mabhodhoro egirazi akajeka.
1. Kugadzirwa kwe opalescent material: opalescent material ndeyekuwedzera opalescent agent mune yakasvibiswa ye pubai material, uye inowanzoshandiswa opalescent agent ndeye fluorspar uye sodium fluorosilicate.Iyo turbidity agent inogona kunyungudutswa zvachose pakupisa kwepamusoro.
Munguva yekutonhodza, nhamba huru yeCaF: uye NaP zviyo zvinonatswa. Nekuda kwehukuru hwakasiyana hwezviyo zveCaF: uye NaF, zvimedu zvakasiyana zvinopindirana nekuda kwechiedza chazvo chakapararira, uye mhedzisiro yacho ndeye - "rudzi rwechena.
Kuparadzira, zvigadzirwa zvegirazi zvinoratidzika semukaka chena. Iyo girazi mhinduro inoodza madziro emoto zvakanyanya mukuita opacification, uye hupenyu hwebasa hweiyo general opacification kiln ndeye makore 1.5-2.5 chete.
Fluoride inogadzirwa negirazi mhinduro mune opacification inokuvadza kune zvakatipoteredza uye muviri wemunhu:
2. Kubika nzira: girazi decals → kubheka → kupfapfaidza → kuongorora, kurongedza chengetedzo.
3. Kukanganisa: Tuft: mukuita turbidity, fluoride volatilization, kunyunguduka kwekushisa kunyunguduka, zvinhu zvekuchengetedza mvura nguva yakarebesa, kuyerera kwemvura kuyerera, kubuda kwehuwandu shanduko uye zvinhu zvinoramba.
Kusachena kwakadai sekukukurwa kunoburitsa tuft phenomenon.
Kukosheswa kwekushushikana kwekugovera: iyo ipfupi zvinhu zvemukaka chena zvinhu zviri nyore kukonzera kusaenzana kwekushushikana kugovera mukuita kwekugadzira, uye kushushikana kwakawanda kunogadzirwa muchigadzirwa, icho chinogona chete kubviswa neannealing.
Mapoinzi, anogona kukonzera kukanganisa kwechigadzirwa.
Zvakapfuura: 700ml Empty round Gin Bottles Wholesale
Zvinotevera: Fekitari mutengo tsika 750ml 700ml gin bhodhoro
500ml Gin bhodhoro
700ml Gin bhodhoro
750ml Gin bhodhoro
Best Gin Mabhodhoro
Empty Gin Mabhodhoro
Fekitari mutengo tsika 750ml 700ml gin bhodhoro
Wholesale 700ml Yakajeka Gin Mabhodhoro Ane Corks